Israa’iil oo duqeysay Saldhigyo ay leedahay Iiraan’ | Allbalcad Online
Home WARARKA Israa’iil oo duqeysay Saldhigyo ay leedahay Iiraan’
Israa’iil oo duqeysay Saldhigyo ay leedahay Iiraan’
Taliska Milatariga Israa’iil ayaa sheegay inay habeennimadii xalay duqeymo aargoosi ah u geysteen bartilmaameedyo ay leeyihiin milatariga Iiraan iyo kuwa Suuriya, oo ku yaalla gudaha waddanka Suuriya, kaddib markii ay bambooyin qarxi kara ku arkeen dhulka ay heystaan ee buuraleyda Golan.
Telefishinka ku hadla afka dowladda Suuriya ayaa sheegay in ciidamada difaaca cirka ee dalkaas “ay la tacaaleen duqeymaha Israa’ill” ayna dhulka soo dhigeen tiro gantaalo ah.
Wuxuu sidoo kale soo tabiyay in weerarradaas lagu dilay saddex askari oo reer Suuriya ah, mid kalena uu ku dhaawacmay.
Hase yeeshee kooxda dabagalka ku sameysa xaaladda Suuriya ayaa shaacisay in duqeymahaas ay ku dhinteen 10 ruux oo ay ku jiraan saddex u dhalatay dalka Iiraan.
Israa’iil ayaa sanadihii lasoo dhaafay marar badan oo hore weerarro xaga cirka ah la beegsatay fariisimo ay milatariga Iiraan ku leeyihiin gudaha Suuriya iyo saldhigyo ay xulafada kale ee garab taagan dowladda Suuriya ee uu madaxweynaha ka yahay Bashaar Al-Asad.
Hase yeeshee, waa dhif iyo naadir in Israa’iil ay si cad u sheegato mas’uuliyadda weerarrada noocaas ah.
Waxay dowladda Israa’iil sheegtay inaysan u dulqaadan doonin “faragalinta” Iiraan ee gudaha Suuriya.
Maalintii Talaadada ayaa saddex miino oo kuwa ciidamada loo dhigo ah laga helay meel u dhow saldhig milatari oo ay Israa’iil ku leedahay buuraleyda Golan, sida uu warfidiyeenka u sheegay afhayeen u hadlay milatariga Israa’iil, oo lagu magacaabo Labo Xiddigle Korneyl Jonathan Conricus.
“Banbooyinkaas waxaa halkaas ku diyaariyay koox u dhalatay Suuriya oo ka amar qaadata ciidamada Iiraan ee loo yaqaanno Quds, kuwaasoo howlgalladoodu ay u badan yihiin dibadda,” ayuu yidhi afhayeenka.
“Sababtaas awgeed ayaan u go’aansannay inaan weerarro aargoosi ah ugu geysanno gudaha Suuriya.”
Diyaaradaha dagaalka ee Israa’iil ayaa beegsaday saddeex xarumood oo ay leeyihiin ciidamada Quds iyo kuwa Suuriya, waxaana ka id ah “bakhaarro hubka lagu keydiyo, saldhigyo milatari”, iyo waliba qalab ay leeyihiin milatariga Suuriya, sida ay sheegeen taliska milatariga Israa’iil.
Labo Xiddigle Korneyl Conricus wuxuu sheegay in saddex saldhig oo ay leeyihiin taliska Iiraan la duqeeyay – kuwaasoo kala ah xarun milatari oo ku taalla garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee caasimadda Dimishiq, saldhig ay ciidamada Quds ku leeyihiin xarunta milatariga Suuriya guutadiisa 7-aad, iyo “xarun milatari oo qarsoodi ah oo lagu martigaliyo wufuudda reer Iiraan”.
“Waxaan rajeyneynaa in hadda ay farriinteennu caddahay – oo aannaan aqbaleynin in Suuriya ay Iiraan u oggolaato una fududeyso inay weerarro u geystaan Israa’iil,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Telefishinka dowladda Suuriya ayaa shaaciyay qaraxyo laga arkayo cirka, gaar ahaan meel ku beegan caasimadda Dimishiq, ka hor waabarigii Arbacada.
“Cadowga Israa’iil ah waxay weerarro dhinaca cirka ah kasoo rideen dhanka buuraha Golan ee Suuriya, kuwaasoo ay ku beegsadeen gobolka koonfureed, waxaana ka hor tagay ciidamada difaaca cirka ee Suuriya, iyagoo soo riday rieo gantaallo ah,” sidaas waxaa Wakaaladda wararka ee Sana u sheegay ilo-wareedyo milatari.
Ilo-wareedyada ayaa intaas ku daray: “Saddex askari ayaa ku shahiiday weerarkaas gardarrada ah, hal askarina wuu ku dhaawacmay, intaasna waxaa sii dheer burbur loo geystay qalab milatari.”
Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Suuriya, oo fadhigiisu yahay UK, ayaa tabiyay in duqeymahaas lala eegtay xarumo ay ciidamada difaaca cirka ee Suuriya ku leeyihiin meel u dhow garoonka diyaaradaha Dimishiq iyo qeybaha koonfur-bari ee magaaladaas. Sidoo kale waxaa lala beegsaday saldhigyo iyo bakhaarro hub oo ay isticmaalaan xoogagga taabacsan Iiraan oo ku yaalla agagaarka magaalooyinka Sayyida Zainab iyo Kiswa.
Toddo dagaalyahan iyo saddex askari oo Suuriya u dhashay ayaa la dilay, sida ay sheegeen.
Weerarkan ugu dambeeyay ayaa kusoo aaday saacado ka hor inta uusan xog hayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Mike Pompeo, booqasho ku tagin Israa’iil. Pompeo ayaa halkaas joogi doona saddex maalmood.
Warbaahinta Israa’iil ayaa tabineysa in Mr Pompeo la filayo inuu noqdo sarkaalkii ugu sarreeyay dowladda Mareykanka ee booqda buuraleyda Golan.
Israa’iil ayaa buuraleyda Golan Suuriya uga qabsatay dagaalkii Bariga Dhexe ee dhacay sanadkii 1967-kii.
Sanadkii 2019-kii, Mareykanka ayaa noqday dalkii ugu horreeyay ee Israa’iil u aqoonsaday dhulkaas, tan iyo Markii ay Israa’iil dhaqdhaqaaqeeda halkaas ka billowday sanadkii 1981-kii.
Previous articleCumar Carte Qaalib Waa Ninkii Diiday Inu u sujuudo Xeyle Salaase
Next articleDowladda Soomaaliya oo War kasoo saartay dagaalka ka socda Itoobiya